Idizayinelwe Ukukhombisa Okuthile Okujwayelekile | Martech Zone
ULwesibili, April 13, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Izingane zami zihlala zihlekisa ngami ngothando lwami lwama-movie opopayi - angikwazi ukuthola okwanele kuzo. Ngenkathi ngibuka iMadagascar 2, ngangiyithanda le ndawo lapho ilambu elibomvu liqala khona ukukhanyisa licime… bhekisisa ukuthi liphathwa kanjani nguphengwini osesondweni:
Kubi kakhulu ukuthi ama-Analytics awahlali enamalambu abomvu abenyezelayo “enzelwe ukukhombisa okuthile okungajwayelekile” kanjalo nezincwajana zokuthi ungazilungisa kanjani. Vele - noma ngabe benze njalo - inqobo nje uma indiza isahamba, kungenzeka bakhethe ukungenzi lutho.
Izinhlangano ziphinde zathanjiswa yizinombolo ezikhulayo (njengami!). Inkinga ukuthi kunezindaba ezijwayelekile ngaphakathi kwezinombolo okufanele zikhanyise ama-red bulb. Kungumsebenzi wakho njengoMarketer ukubathola… mhlawumbe ukwehla okuphawulekayo kuthrafikhi yamagama asemqoka, noma isayithi elibhekisayo elivela kungazelelwe.
Okusondelene kakhulu nemanuwali izeluleko eziqhubekayo zabantu abanjengo Avinash Kaushik futhi analytics izindlela ezihamba phambili amabhulogi. Hlobo luni lwamalambu abomvu osuwatholile (noma awawanaki) ku-Analytics yakho?
Mhlawumbe kufanele wenze okuthile ngakho ngaphambi kokuba indiza iye phansi! Noma ingabe uthola imibiko yakho yezibalo “enhle futhi eluthayo ngandlela thile”?
Tags: Ama-Analyticsmadagascarinkinobho ebomvu